ရာသီမမှန်ရင် ကလေးရနိုင်သလား . .
မေး – ရာသီမမှန်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ရာသီမမှန်ရင် ကလေးရနိုင်ပါသလား။ မီမီကျော် Fb # ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားသည်။ ဖြေ – ကလေးရတဲ့ကိစ္စက အကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ် မှာတော့ မူတည်မနေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရာသီမှန်မှန် လာတဲ့ မိခင်လောင်းကတော့...
နေကြာစေ့၏ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
လရိပ်မေ အာဟာရဓာတ်များ – အဆီ ၇၉ ရာခိုင်နှုန်း – ပရိုတင်း ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း – အမျှင်ဓာတ် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း – ကယ်လိုရီ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်း ဗီတာမင်ဓာတ် – ဗီတာမင်အီး ၁၆၆...
OA ဒူးနာရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ဒူးနာတာက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဒူးနာတာကအဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်ခုပါ။ ဒူးနာရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒူးထဲမှာ ထိမိ၊ ခိုက်မိရင်လည်း ဒူးနာပါတယ်။ တီဘီရောဂါဖြစ်ရင်လည်း ဒူးနာပါတယ်။ အရိုးကျိုးရင်လည်း ဒူးနာပါတယ်။ ပြည်ပိုးဝင်ရင်လည်း...
အိုမင်းမှုကို ဟန့်တားပေးသည့် အကောင်းဆုံး ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ရုပ်ရည်အိုမင်းမှုကို ဟန့်တားပေးတဲ့ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တွေကို စားသင့်ပါတယ်။ – နနွင်း နနွင်းမှုန့်မှာ အနာကျက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားကို ဆန့်ကျင်ပေးပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ နနွင်းမှုန့်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကာကူမင်ဒြပ်ပေါင်းဟာ နနွင်း...
နွေကာလတွင် သင့်အချစ်တော် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးအား စောင့်ရှောက်နည်း
၁။ နွေနေရှိန်က ပူပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် ခွေးတွေကို အရိပ်ရတဲ့ နေရာမှာ ထားပါ။ ၂။ အမွေးနည်းတဲ့ ခွေးတွေ၊ အရောင်ဖျော့ဖျော့ အမွေးရှိတဲ့ ခွေးတွေက နေဒဏ်ခံရနိုင်ခြေ အများဆုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် အ၀တ်အစားဝတ်ပေးပါ။ ၃။ ခွေးနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်တာ၊ ဆော့...
– ပန်းသီးစိမ်းမှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှု များပါတယ်။ – ပန်းသီးစိမ်းက အူမကြီးကင်ဆာအန္တရာယ်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ – ပန်းသီးစိမ်းမှာ မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော ပါဝင်မှုမရှိတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲကမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောတွေကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ – ပန်းသီးစိမ်းစားတာကြောင့် အစာကြေညက်စေပါတယ်။ – ပန်းသီးစိမ်းစားတာကြောင့် အသည်းနဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်...
အကြောပြတ်ရာများ ကင်းစင်စေမည့် လေ့ကျင့်ခန်း
၊ ကိုထက် ၊ အိမ်မှာပြုလုပ်ရလွယ်ကူတဲ့ အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေက ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ၀မ်းဗိုက်တွေမှာရှိတဲ့ အကြောပြတ်ရာတွေကို ကင်းစင်စေပါတယ်။ (၁) ခြေထောက်မြှင့်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှာပြထားတဲ့အခါ ဖျာပေါ်လှဲပြီး ခြေထောက်ကိုနံရံပေါ် ထောက်ထားပါ။ ခြေထောက်မြှင့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းက ခြေသလုံးကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းတင်းရင်းစေပါတယ်။ (၂) ကိုယ်လှည့်...
ရတနာဗိုလ်၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘ၀
အခုလတ်တလော ဂျာနယ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ တခြားကြော်ငြာတွေလည်း ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ မန္တလေး ဒါမှမဟုတ် နေပြည်တော်ကမဏ္ဍပ်တစ်ခုခုမှာ သီချင်းဆိုဖြစ်ဖို့တော့ ရှိပါတယ်။ အသားအရေမပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းပုံ အရမ်းပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ Sun Cream များများ လိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်သွားရင်လည်း လက်ရှည်အင်္ကျီတွေ ၀တ်သွားပါတယ်။...
Page 511 of 593« First‹ Previous507508509510511512513514515Next ›Last »